Umdaniso nje | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 1, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kukho ingoma yeLady Ga-ga esele ikho malunga nonyaka ngoku ebizwa Vele udanise. Andikwazi ukuyikhupha entlokweni yam. Andinguye umlandeli omkhulu weGa-ga-ooh-la-la… kodwa zonke iingoma ezingama-40 eziphambili zenza ukuba intombi yam inyuse unomathotholo kwaye iqale ukucula. Andikwazi ukunceda kodwa ndicule kunye.
Umdaniso nje ubonakala njengengoma emalunga nokuba yingcebiso encinci kodwa ngokutsiba nje kumgangatho wokudanisa kwaye ukhulule. Vele udanise!
Kule veki ndiseNew Orleans ndisenza intetho ye-sprint (me + sprint = funny) ye IiWebtrends Zenze inkomfa. Umyalezo wam wokuqala kwiinkampani ezinqwenela ukwakha ishishini labo kwiiblogi kukuba ziphambili. Kufuneka babe ngaphambili kumgangatho womyalezo wabo. Bafuna ukuba ngaphambili basebenzise imidiya yoluntu. Kufuneka babe ngaphambili kwiinjini zokukhangela. Njani? Iinkampani kufuneka zingahoyi zonke iziphazamiso kwaye Vele udanise xa kuziwa kwiMidiya yokuNxibelelana. Fumana isicwangciso, phuma emgangathweni kwaye uphumeze.
Awufumani ndawo ngokubhekisele kwintyatyambo yodonga.
Phambi kokuba ndishiye isikhululo seenqwelomoya e-Indianapolis, ndafumana i-imeyile kumlingane endandikhe ndadibana naye kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Uye wabizwa yi-White House ukuba ahlangane noMongameli ngenxa yeentetho ezikhuthazayo ebezenza kuluntu olumnyama. Elakhe ibali liyamangalisa kwaye umyalezo wakhe awuyiyo le nto unokucinga… uthi u-2010 sisiphelo sezizathu zokuba abantu bafumane ubukhulu babo. Akusayi kubakho kubekwa tyala kwabanye, wonke umntu kufuneka embe nzulu kwaye aphile ngokuhambelana namandla abawanikwe nguThixo. Lowo ngumyalezo onamandla ngokumangalisayo kuwo wonke umntu… hayi nje abantu abambalwa kweli lizwe.
Inyani yile yokuba kulula kakhulu ukuhamba ebomini usenza into ebesixelelwe yona ngabazali bethu, ootitshala bethu, urhulumente wethu… sisebenze nzima, sithenge imali, sakhe i-401k. Xa ndiza kubhabha, bendidla I-Linchpin: Ngaba ubalulekile?. Ngoku abantu bengasebenzi, i-401k yabo ihambile, baphulukene nobudenge babo ... kuyabonakala ukuba imeko yangoku ibilelona xoki likhulu kwimbali yaseMelika.
USeth Godin ubhala,
Ekuphela kwendlela yokufumana into exabisekileyo kukuba ume ngaphandle, wenze umsebenzi weemvakalelo, ubonwe njengoyimfuneko, kwaye uvelise unxibelelwano olunomdla kwimibutho nakubantu.
Yeka ukudlala ngemithetho kwaye uhambelane nenani elingenasiphelo lezinye iicogs (ixesha likaSeth Godin) elizise eli lizwe kunye nazo zonke iitalente phaya emadolweni kunye noqoqosho lwethu. Fumana i-niche yakho, ungabamameli abo bathetha into engeyiyo ... khupha i-butt yakho kumgangatho wokudanisa kwaye uyigungqise.
Ndiyathemba ukuba lengoma izakuhlala inamathele entlokweni yakho ngoku…